“ဥပဒေအကာအကွယ် ရဖို့ မျှော်လင့်လို့ မလွယ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ ကျနော်တို့တွေ ဒီထက်ပိုပြီး စုစည်းနေဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ် ။ တရစ်ပြီး တရစ် တိုးလာတဲ့ သူတို့ လှုပ်ရှားမှုဟာ မကြာခင် ကြီးကြီးမားမား တခုခုဖြစ်လာနိုင်လို့ သတိလည်းထားကြပါ “ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Home“ဥပဒေအကာအကွယ် ရဖို့ မျှော်လင့်လို့ မလွယ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ ကျနော်တို့တွေ ဒီထက်ပိုပြီး စုစည်းနေဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ် ။ တရစ်ပြီး တရစ် တိုးလာတဲ့ သူတို့ လှုပ်ရှားမှုဟာ မကြာခင် ကြီးကြီးမားမား တခုခုဖြစ်လာနိုင်လို့ သတိလည်းထားကြပါ “
“ဥပဒေအကာအကွယ် ရဖို့ မျှော်လင့်လို့ မလွယ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ ကျနော်တို့တွေ ဒီထက်ပိုပြီး စုစည်းနေဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ် ။ တရစ်ပြီး တရစ် တိုးလာတဲ့ သူတို့ လှုပ်ရှားမှုဟာ မကြာခင် ကြီးကြီးမားမား တခုခုဖြစ်လာနိုင်လို့ သတိလည်းထားကြပါ “
“ဥပဒေအကာအကွယ် ရဖို့ မျှော်လင့်လို့ မလွယ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ ကျနော်တို့တွေ ဒီထက်ပိုပြီး စုစည်းနေဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ် ။ ”
“တရစ်ပြီး တရစ် တိုးလာတဲ့ သူတို့ လှုပ်ရှားမှုဟာ မကြာခင် ကြီးကြီးမားမား တခုခုဖြစ်လာနိုင်လို့ သတိလည်းထားကြပါ ။”-
D Min Swe · Yangon, Myanmar ·
Credit – theinny oo
မနေ့က .. မီဒီယာ သမား တဦး ရန်စခံခဲ့ ရတယ်​။.!!
ဒီနေ့ သတင်းနှစ်ခုအတွက် ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ဖြစ်တယ် ။
နှစ်ခုလုံးကလည်း မျိုးချစ်အမည်ခံ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်တယ် ။
ပထမ တခုက ကမာရွတ်တရားရုံးမှာ ။
ဖြစ်ချင်တော့ ၀ီရသူ ရောက်လာတယ် ။
ရောက်လာတာကို ဓာတ်ပုံရိုက်နေ သတင်းယူနေတဲ့ သတင်းထောက်သုံးလေးယောက်လောက်ရှိနေတဲ့ နေရာထဲကို …….
လူငယ်လေးငါးယောက်လောက်က အရှိန်နဲ့ ပစ်ဝင်ပြီး ကျနော်တို့ကို တွန်းထုတ်တယ် ။
ကျနော်ကတော့ နောက်မှာရှိတဲ့ ကားနံရံမှာ ကပ်သွားတယ် ။
ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကို တွန်းပြီး မင်းက ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲ မင်းက ဘာလုပ်ချင်လို့လဲလို့လေသံမာမာနဲ့ မေးတဲ့လူက လေးယောက်လောက်ရှိတယ် ။
ဒီတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်နေကြောင်း ဘာမှ
ဘေးမှာရှိတဲ့ မျိုးချစ်အုပ်စုထဲက အဒေါ်ကြီးတွေဝင်တားလို့ အဲ့ကောင်တွေ ပြန်ထွက်သွားတယ် ။
ဒါနဲ့ ၀ီရသူ နောက် ဆက်မလိုက်ပဲ နေခဲ့တယ် ။
စစ်ထက်အောင်နဲ့ သီဟပြန်ထွက်လာတော့ အဲ့တရားရုံးနဲ့ တစ်မှတ်တိုင်လောက်ဝေးတဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သွားထိုင်တယ် ။
ခဏနေတော့ ဆိုင်ထဲ လေးယောက်ဝင်လာပြီး ခုဏ ရန်ဖြစ်သွားတာ ဘယ်သူလဲ ဘာညာနဲ့ လာလုပ်တယ် ။
မသိဘူးပေါ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့လူတစ်ယောက်ကို ပါးရိုက်သွားလို့တဲ့ ။
ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ ဆံပင်အရှည်နဲ့ဆိုပြီး ကိုယ့် ကြည့်ပြီးပြောတာ ။
ဒါနဲ့ ဆိုင်အပြင်လှမ်းရှိူးလိုက်တော့ လေးငါးယောက်လောက်ကလည်းဆိုင်
ဒါနဲ့ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း လူမှားတဲ့အကြောင်း အေးဆေးရှင်းပြတော့
သတင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမျိုးမျိုးခြိမ်းခြောက်ပြီး ပြန်ထွက်သွားတယ် ။
ဒါနဲ့ ခဏနေပြန်လာတယ် ။
အဲ့မှာတည်းက ဒီကောင်တွေကို နောက်အဖက်မလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်မိတယ် ။
ကိုယ်တွေကို ပစ်မှတ်ထားနေမှန်းက သေချာနေပြီလေ ။
သတင်းထောက်တွေနဲ့ ရန်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီး သတင်းထောက်တွေလွန်လို့
ဖြစ်တာပါဆိုတဲ့ အချိုးမျိုးဖန်တီးနေတာ သိသာလွန်းတယ် ။
ဗိုလ်စိန်မှန်မှာ မြတ်သူကျော်ကို စထိုးပြီး ကွိုင်ရှာကတည်းက
ဒါနဲ့ ရုံးမှာနေရင်း သာကေတမှာ အာရဗီစာသင်ကျောင်းတွေကို
အဲ့ကောင်တွေ သွားပြသနာရှာနေပြီဆိုတာ ကြားရတယ် ။
ဒါနဲ့ သေသေချာချာစဉ်စားရတယ် ။
ဒီကောင်တွေတခါလိုက်တည်နေတဲ့ ကိုယ်က သွားလို့သင့်မသင့် တော်တော်စဉ်းစားပြီးမှ ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့တယ် ။
ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ဟိုရောက်တာနဲ့ ကျနော့်ကို ဖုန်းတွေနဲ့ခိုးရိုက်တာရော ပေါ်တင်လာရိုက်တာရော အမျိုးမျိုးကြုံရတော့ စိတ်ထဲတော်တော်
မကြာဘူး AP က မင်းကြည်သိန်းကို ဒီကောင်တွေ ပြသနာရှာပြီး ကိုယ်ထိ
ဖြစ်ရတဲ့ ပြသနာက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးထဲဝင်မယ့် သတင်းထောက်ကို
ဘာမှမဟုတ်တဲ့ စကားပြောရိုင်းတဲ့ မျိုးချစ်အမည်ခံကောင်တွေက
ဘေးက သင်္ဃန်းဝတ်တစ်ယောက်က မင်းတို့မီဒီယာတွေ ဘလာ ဘလာနဲ့
ရပ်တည်ချက် ယုံကြည်မှု ထိခိုက်စေတဲ့ စကားတွေပြောလို့ ပြန်ပြောရင်း
တကယ်တော့ ဒါက ပြသနာဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး ။
ဒါပေမယ့် တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။
ဒီတော့ ဘာလဲဆိုတော့ သူတို့မီးထွန်းပြသနာရှာနေတဲ့ အစ္စလာမ်အသိုင်းအ၀ိုင်းက သည်းခံနေတော့
မီးမွှေးလို့ရမယ့် …သူတို့လုပ်သမျှကို.. အမှန်အတိုင်း အထုပ်ဖြေပြနေတဲ့ ..မီဒီယာဘက်ကို လှည့်တာလို့မြင်တယ် ။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပွဲမဖြစ်ဖြစ်အောင် လိုက်တည်နေသလိုဖြစ်နေတယ် ။
ဒီတော့ ဒီကောင်တွေနဲ့ မလွှဲသာမရှောင်သာပက်သတ်ရမယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ သတိထားကြပါ ။
ဥပဒေအကာအကွယ် ရဖို့ မျှော်လင့်လို့ မလွယ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ ကျနော်တို့တွေ ဒီထက်ပိုပြီး စုစည်းနေဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ် ။
တရစ်ပြီး တရစ် တိုးလာတဲ့ သူတို့ လှုပ်ရှားမှုဟာ မကြာခင် ကြီးကြီးမားမား တခုခုဖြစ်လာနိုင်လို့ သတိလည်းထားကြပါ ။
သတိပေးစရာရှိရင်လည်းအချင်းချင်း သတိပေးကြပါ မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့
← ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် လမ်းထဲက ဘာသာခြားတွေနဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင်နေပါ။ အပြန်အလှန်မေတ္တာထားပါ။ ဟိုတယ်ကြီးတွေ၊ ခန်းမကြီးတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာ ငွေကုန်ကြေးကျမြောက်မြားစွာခံပြီး ဖန်ငွေရဖို့ လုပ်နေတဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးပွဲတွေထက် ရပ်ကွက်ထဲက တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးကမှ တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျုပ်တို့ခများတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်
တရားမဝင် ဗလီ … ရှေးဗမာမင်း၊ရခိုင်မင်းများဟာ မွတ်ဆလင်တွေအတွက် ဝတ်ပြုဆုတောင်းဖို့ရာ ဗလီများတည်ဆောက်ခွင့် ပေးခဲ့ရုံသာမက သူတို့ကိုယ်တိုင် ငွေကြေးစိုက်ထုတ် လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုလိုနီလက်အောက် ရောက်ခဲ့စဉ်မှာရော၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ လက်ထက်မှာပါ နိုင်ငံသားမွတ်စလင်များအတွက် ဗလီများ တည်ဆောက်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၂ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဘာသာရေး လူမျိုးရေး သပ်လျှိုသွေးခွဲခဲ့စဉ်ကစလို့ ဗလီအသစ်ဆောက်ဖို့ကို မဆိုထားနှင့်၊ အဟောင်းကိုတောင် ပြု ပြင်ထိမ်းသိမ်းဖို့ အလွန်ခက်ခဲလာခဲ့ပါတယ် →
The Purpose of Life – By Jeffrey Lang
88 Myanmar Muslim leader Ko Mya Aye is threatened by Myanmar Military Thug ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု
Angelina Jolie issuedawarning to the world about nationalism while speaking to the UN
Ko Mya Aye. “ကမ္ဘာမကြေဘူး..ငါတို့သွေးနဲ့ရေးခဲ့ရတဲ့မော်ကွန်းတွေ…”
drkokogyi on 88 Myanmar Muslim leader Ko My…
drkokogyi on အရည်ချင်းအရ ယှဉ်ပြိုင်ဘို့ ယုံ…
drkokogyi on ဒီနေ့ လွှတ်တော်မှာ မင်းကင်းအမတ်…
မစော်ကားပါနဲ့ အိမ်ရှင်- အိမ်ဌား ဧည့်သည်-ဧည့်ရှင်.....တွေ ....အစရှိတဲ့ သောက်ရူး စကားတွေမပြောပါနဲ့ စစ်မှန်တဲ့သံဃာတော်တွေ မိတ်ဆွေတွေကို အားနာလို့ လျှော့ပေးထားတာပါ
ပန်းသေးမျိုးနွယ်စုအကြောင်း ပိုစ်များ...အမေရိကန် အထူးသံအမတ်ကြီး David Saperstein မန္တလေးမြို့မှ သမိုင်းဝင် ပန်းသေးဗလီဝတ်ကျောင်း သို့သွားရောက်လေ့လာ